के हो पिसाब संक्रमण, कसरी थाहा पाउने ? | सुदुरपश्चिम खबर
समयमै उपचार गरिएन भने घातक परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । भागदौड जीवनशैलीमा व्यक्तिहरूमा प्रायः मूत्र रोगको समस्या देखिन्छ । यो रोग जीवनशैलीसँग जोडिएको छ । यसको कारण मूत्र रोगमात्र होइन, नपुंसकताको घटना पनि बढिरहेको छ ।
यसबाट बच्न यौनमार्गको सफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सफाइको अभावमा संक्रमण हुने सम्भावना बढिरहन्छ । जीवनशैली परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यदि कसैलाई ५ एमएमको पत्थरी किड्नीमा छ भने, यसका लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन ।
दिनमा तीन–चार लिटर पानी नियमित रूपले केही दिन पिउने हो भने पत्थरी स्वतः पिसाबबाट निस्केर जान्छ । कुनै औषधि खानु पर्दैन । पिसाबले च्यापेको बेला सबै काम छोडेर पिसाब गर्नुपर्छ । एउटा भनाइ छ, ‘पिसाब र हिसाब क्लियर राख्नुपर्छ’ अर्थात् पिसाबलाई च्यापेर राख्नु हुँदैन ।
मूत्रकृच्छमा पिसाब फेर्ने बेला दुखाइ हुन्छ । मूत्राशयमा दुखाइ भएका बेला पिसाब रोकिन्छ । यसैगरी हिस्टेरिया (स्त्री रोग) चिन्ता, टाउकोमा चोट लाग्नु, पेटको विकार, रक्सी खानु, भिरिंगी रोग, कब्जियत हुनु, पौष्टिक भोजनको कमी आदि कारणले पनि घरिघरी पिसाब लाग्छ । मूत्रमार्गको संक्रमण (यूटीआई) जस्तै–सार्वजनिक शौचालयमा पिसाब गर्दा या अस्पतालहरूमा मूत्रमार्गमा उपयोग गरिने एक किसिमको उपकरणको माध्यमबाट पनि संक्रमण हुन सक्छ । समुदायबाट संक्रमित ब्याक्टेरियाबाट पनि हुन्छ । जसलाई मेडिकल भाषामा ‘ई–कोलाई’ भनिन्छ ।
होमियोप्याथिक चिकित्सामा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणलाई हेरेर रोगीको सम्पूर्ण लक्षणको आधारमा उपचार गर्ने गरिन्छ । कुनै रोग विशेषको उपचार गरिँदैन, रोगीको उपचार गरिन्छ । पिसाबसम्बन्धी रोगमा रोगीको लक्षणनुसार प्रयोग हुने केही औषधिहरू यस्ता छन्ः
४. पिसाब गर्ने बेलामात्र होइन अन्य समयमा पनि मूत्राशयमा जलन भएमा स्टेफिसेग्रिया ३० रामबाँण औषधिको काम गर्दछ ।
५ काइल्युरिया रोगमा पिसाब मैदाको धुलोजस्तै सेतो खुब गाढा दूध या चियाको रङजस्तो हुन्छ । यस किसिमको पिसाबसम्बन्धी रोग भएमा सिट्लन्जिया ६ र शक्तिको औषधि सेवन लाभदायक मानिन्छ ।
६.रातको समय पिसाबले बढी च्याप्नु, फोर्स रहे पनि मूत्राशयको शक्ति घट्नु, जसका कारण धेरैबेर बसे पनि पिसाब बिस्तारै हुनु, पिसाब भइसके पछि पनि थोपाथोपा पिसाब चुहिनु, आगोले पोलेको जस्तै पिसाब पोल्नु । यस किसिमको लक्षण देखिएमा केलिकार्ब ३० शक्तिको औषधिको सेवन गर्नु पर्दछ ।
उपरोक्त होमियोप्याथिक औषधिको सेवन आफ्ना नजिकका चिकित्सकको सल्लाह लिई सेवन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । (gnewsnepal.com बाट सभार)
चौलानी नदीमा बगेर एक जना पुरुषकोे मृत्यु !!